धादिङबेसीमा डा. केसीको माग समर्थन गर्दै सिठ्ठी जुलुस — Himali Sanchar
धादिङबेसी – आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीको समर्थन गर्दै धादिङबेसीमा सिठ्ठी जुलुस प्रदर्थन गरिएको छ
स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षाका विषयमा विभिन्न माग राख्दै २५ दिनदेखि अनशनरत डा. केसी को समर्थनमा मंगलबार धादिङबेसीमा नागरीक समाज पत्रकार विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनीधीहरुले सिठ्ठी जुलुस प्रदर्थन गरेका हुन् ।
देशभरबाट डा. केसी समर्थनमा सरकारलाई दवाव आए सँगै वार्ता जारी भएको छ । वार्ता टोलीले संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने फिर्ता गर्नुपर्ने पूर्वशर्त छाडेपछि सरकारी टोलीसँग संवाद सुरु भएको हो । यसका लागि नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले पहल गरेका थिए ।
उनले केदारभक्त माथेमा र मेडिकल काउन्सिलका धर्मकान्त बास्कोटासँग छलफल गरेका थिए ।
लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल गरे । नेम्वाङले डा। केसीको वार्ता टोलीसँग पनि सम्वाद गरे ।
सिंहदरबारमा भएको छलफलमा डा। केसीको वार्ता टोलीले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा केके संशोधन गर्नुपर्छ भनेर लिखित नै दिएको छ । स्रोतका अनुसार १० वर्षे प्रतिबन्ध, ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिनुपर्ने लगायतका बुँदा छन् । नेम्वाङको पहलपछि सरकारी र डा। केसीको वार्ता टोलीबीच औपचारिक सम्वाद सुरु भएको छ ।